မကျဆီက တိုကျစဈမှူးလား..? ၊ ဂိုးဖနျတီးရှငျလား…? – the One Sports Journal
မကျဆီက တိုကျစဈမှူးလား..? ၊ ဂိုးဖနျတီးရှငျလား…?
ဒီနမေ့နကျမှာ ယှဉျပွိုငျ ကစားခဲ့တဲ့ ကိုပါအမရေိက ပှဲစဉျ ၂ပှဲမှာ ပရီသတျတှေ စိတျဝငျစားမှုမြားခဲ့တဲ့ အာဂငျြတီးနားးနဲ့ ဥရုဂှေးတို့ရဲ့ အုပျစု ပှဲစဉျမှာ အာဂငျြတီးနား အသငျးက ဥရုဂှေး အသငျးကို တဈဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုငျရရှိသှားခဲ့ပါတယျ။
အာဂငျြတီးနား အသငျး ရရှိခဲ့တဲ့ အနိုငျဂိုးကို မကျဆီ ရဲ့ဖနျတီးပေးမှုကနေ ရိုဒရီဂှတျဈ က သှငျးယူသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အဖှငျ့ပှဲစဉျမှာ အာဂငျြတီးနား အသငျးဟာ ခြီလီအသငျးနဲ့ သရကေခြဲ့ပမေယျ့ ဒီပှဲအနိုငျရခဲ့တာကွောငျ့ (၂)ပှဲကစား(၄)မှတျရရှိနခေဲ့ပါတယျ။
ခြီလီကလညျး မနကျကပှဲမှာ ဘိုလီဗီးယားအသငျးကို (၁-ဝ)နဲ့အနိုငျရခဲ့တာကွောငျ့ သူတို့အသငျးနှဈသငျးဟာ အခုအခြိနျမှာ ရမှတျတူ ဂိုးကှာခွားခကျြအတူနဲ့ အမှတျပေးဇယားမှာ ထိပျဆုံးကရပျတညျနကွေပွီး H2H အရ မကျဆီက ခြီလီအသငျးကို ဦးဆောငျဂိုးသှငျးယူထားခဲ့နိုငျတာကွောငျ့ အမှတျပေးဇယားမှာ အာဂငျြတီးနားက ပထမနရောကို ဦးဆောငျခှငျ့ရရှိထားပါတယျ။
ဒီနပှေဲ့မှာ အာဂငျြတီးနား အသငျးဟာ အဂူရို၊ ဒီမာရီယာ၊ ကျောရီရာ တို့ကို အရနျကစားသမားအဖွဈနဲ့သာ အသုံးပွုခဲ့ပွီး ဥရုဂှေး အသငျးကတော့ သူတို့ရဲ့အဓိက ကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ ဆှာရကျဇျ၊ကာဗာနီ၊ဗယျလျ‌ဗာဒီ၊ဂိုဒငျ တို့နဲ့ ပှဲထှကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီနှဈသငျးရဲ့ ခွစှေမျးဟာကှာဟမှု အမြားကွီး မရှိပမေယျ့ မကျဆီ ရှိနခွေငျးက အာဂငျြတီးနားအသငျးကို တပနျးသာစခေဲ့တာပါ။ ဒီပှဲစဉျမှာ မကျဆီဟာ သှငျးဂိုး သှငျးယူနိုငျခွငျး မရှိပမေယျ့ ပှဲခြိနျ(၁၃)မိနဈမှာ ရိုဒရီဂှကျဈရဲ့ ခေါငျးတိုကျသှငျးဂိုးကို သူက ဘယျတောငျပံကနေ ဖွတျတငျဘောနဲ့ ဖနျတီးပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
အာဂငျြတီးနားအသငျး အနနေဲ့ အုပျစုတှငျးမှာ အခကျခဲဆုံး ပွိုငျဘကျတှေ ဖွဈတဲ့ ခြီလီအသငျးနဲ့ ဥရုဂှေးအသငျးတို့ကို ရငျဆိုငျ ကစားပွီးပွီ ဖွဈတာကွောငျ့ လကျကနျြပှဲစဉျတှဟော သူတို့အသငျးအတှကျ ဥရုဂှေး အသငျးဟာ ကာဗာနီ၊ ဆှာရကျဇျတို့ပါဝငျပမေယျ့ အာဂငျြတီးနား အသငျးရဲ့ဂိုးပေါကျကိုတော့ တဈကွိမျမှ မခွိမျးခွောကျနိုငျခဲ့ပါဘူး။ အာဂငျြတီးနား အသငျးဟာ ဂိုးပေါကျထိရောကျမှု (၆)ကွိမျရှိခဲ့ပမေယျ့ ဥရုဂှေး ဂိုးသမား လကျစှမျးပွကာကှယျနိုငျခဲ့လို့ တဈဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ့ သာ အနိုငျရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အသငျးခေါငျးဆောငျ မကျဆီ ဟာ ကိုပါအမရေိက(၂)ပှဲလုံးမှာ (၁)ဂိုးသှငျး (၁)ဂိုးဖနျတီးနိုငျခဲ့ပွီး အာဂငျြတီးနား အတှကျ ကောငျးမှနျတဲ့ ခွစှေမျးကို ပွသထားပါတယျ။ သူဟာ ဒီ(၂)ပှဲလုံးရဲ့အကောငျးဆုံးကစားသမားဆုကို ရယူထားနိုငျသူလညျး ဖွဈလာပါတယျ။ အုပျစုလကျကနျြပှဲစဉျတှမှောက ပါရာဂှေးအသငျး၊ ဘိုလီးဗီးယားအသငျးတို့နဲ့ ကစားရမှာဖွဈတာကွောငျ့ အာဂငျြတီးနား အသငျးအတှကျက ခကျခဲတဲ့ ပွိုငျဘကျတှနေဲ့ ရငျဆိုငျရမယျ့ အုပျစုပှဲစဉျတှကေ ပွီးဆုံးခဲ့ပွီလို့ဆိုနိုငျပါတယျ။ အာဂငျြတီးနား လကျရှေးစငျ အသငျးကွီးနဲ့ ဆုဖလားကိုငျမွှောကျလိုနတေဲ့ မကျဆီအတှကျတော့ ဒီပွိုငျပှဲဟာ သူ့ရဲ့ ဆန်ဒတှကေို ဖွညျ့စညျးနိုငျတော့မလားဆိုတာ…
မက်ဆီက တိုက်စစ်မှူးလား..? ၊ ဂိုးဖန်တီးရှင်လား…?
ဒီနေ့မနက်မှာ ယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့တဲ့ ကိုပါအမေရိက ပွဲစဉ် ၂ပွဲမှာ ပရီသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားမှုများခဲ့တဲ့ အာဂျင်တီးနားးနဲ့ ဥရုဂွေးတို့ရဲ့ အုပ်စု ပွဲစဉ်မှာ အာဂျင်တီးနား အသင်းက ဥရုဂွေး အသင်းကို တစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
အာဂျင်တီးနား အသင်း ရရှိခဲ့တဲ့ အနိုင်ဂိုးကို မက်ဆီ ရဲ့ဖန်တီးပေးမှုကနေ ရိုဒရီဂွတ်စ် က သွင်းယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ အာဂျင်တီးနား အသင်းဟာ ချီလီအသင်းနဲ့ သရေကျခဲ့ပေမယ့် ဒီပွဲအနိုင်ရခဲ့တာကြောင့် (၂)ပွဲကစား(၄)မှတ်ရရှိနေခဲ့ပါတယ်။
ချီလီကလည်း မနက်ကပွဲမှာ ဘိုလီဗီးယားအသင်းကို (၁-ဝ)နဲ့အနိုင်ရခဲ့တာကြောင့် သူတို့အသင်းနှစ်သင်းဟာ အခုအချိန်မှာ ရမှတ်တူ ဂိုးကွာခြားချက်အတူနဲ့ အမှတ်ပေးဇယားမှာ ထိပ်ဆုံးကရပ်တည်နေကြပြီး H2H အရ မက်ဆီက ချီလီအသင်းကို ဦးဆောင်ဂိုးသွင်းယူထားခဲ့နိုင်တာကြောင့် အမှတ်ပေးဇယားမှာ အာဂျင်တီးနားက ပထမနေရာကို ဦးဆောင်ခွင့်ရရှိထားပါတယ်။
ဒီနေ့ပွဲမှာ အာဂျင်တီးနား အသင်းဟာ အဂူရို၊ ဒီမာရီယာ၊ ကော်ရီရာ တို့ကို အရန်ကစားသမားအဖြစ်နဲ့သာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး ဥရုဂွေး အသင်းကတော့ သူတို့ရဲ့အဓိက ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ ဆွာရက်ဇ်၊ကာဗာနီ၊ဗယ်လ်‌ဗာဒီ၊ဂိုဒင် တို့နဲ့ ပွဲထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်သင်းရဲ့ ခြေစွမ်းဟာကွာဟမှု အများကြီး မရှိပေမယ့် မက်ဆီ ရှိနေခြင်းက အာဂျင်တီးနားအသင်းကို တပန်းသာစေခဲ့တာပါ။ ဒီပွဲစဉ်မှာ မက်ဆီဟာ သွင်းဂိုး သွင်းယူနိုင်ခြင်း မရှိပေမယ့် ပွဲချိန်(၁၃)မိနစ်မှာ ရိုဒရီဂွက်စ်ရဲ့ ခေါင်းတိုက်သွင်းဂိုးကို သူက ဘယ်တောင်ပံကနေ ဖြတ်တင်ဘောနဲ့ ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အာဂျင်တီးနားအသင်း အနေနဲ့ အုပ်စုတွင်းမှာ အခက်ခဲဆုံး ပြိုင်ဘက်တွေ ဖြစ်တဲ့ ချီလီအသင်းနဲ့ ဥရုဂွေးအသင်းတို့ကို ရင်ဆိုင် ကစားပြီးပြီ ဖြစ်တာကြောင့် လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေဟာ သူတို့အသင်းအတွက် ဥရုဂွေး အသင်းဟာ ကာဗာနီ၊ ဆွာရက်ဇ်တို့ပါဝင်ပေမယ့် အာဂျင်တီးနား အသင်းရဲ့ဂိုးပေါက်ကိုတော့ တစ်ကြိမ်မှ မခြိမ်းခြောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အာဂျင်တီးနား အသင်းဟာ ဂိုးပေါက်ထိရောက်မှု (၆)ကြိမ်ရှိခဲ့ပေမယ့် ဥရုဂွေး ဂိုးသမား လက်စွမ်းပြကာကွယ်နိုင်ခဲ့လို့ တစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ့ သာ အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဆီ ဟာ ကိုပါအမေရိက(၂)ပွဲလုံးမှာ (၁)ဂိုးသွင်း (၁)ဂိုးဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီး အာဂျင်တီးနား အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ခြေစွမ်းကို ပြသထားပါတယ်။ သူဟာ ဒီ(၂)ပွဲလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကို ရယူထားနိုင်သူလည်း ဖြစ်လာပါတယ်။ အုပ်စုလက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေမှာက ပါရာဂွေးအသင်း၊ ဘိုလီးဗီးယားအသင်းတို့နဲ့ ကစားရမှာဖြစ်တာကြောင့် အာဂျင်တီးနား အသင်းအတွက်က ခက်ခဲတဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ့် အုပ်စုပွဲစဉ်တွေက ပြီးဆုံးခဲ့ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အာဂျင်တီးနား လက်ရွေးစင် အသင်းကြီးနဲ့ ဆုဖလားကိုင်မြှောက်လိုနေတဲ့ မက်ဆီအတွက်တော့ ဒီပြိုင်ပွဲဟာ သူ့ရဲ့ ဆန္ဒတွေကို ဖြည့်စည်းနိုင်တော့မလားဆိုတာ…
စိတျပကျြဖှယျ ခွစှေမျးနဲ့ပတျသကျလို့ အင်ျဂလနျအသငျးအား မျောရငျညိုရဲ့သုံးသပျခကျြ
ဂြာမနီအသငျးနဲ့ ဆုံတှခေဲ့တဲ့ပှဲတိုငျး ဂိုးမသှငျးနိုငျသေးတဲ့ စီရျောနယျလျဒို